Mpanamboatra mpanasa lohataona avo lenta | Yanzhao
sokajy 4.8 / 8.8 baoritra hex oxidation mainty
sokajy 4.8 / 8.8 zinc nopetahany takela-bato hex
hetsagon socket bolts
kofehy loha flange
sokajy 4.8 / 8.8 voan-oksidena mainty hex
voanjo hex nopetahany zaridaina 4,8 / 8,8
kofehy vita amin'ny baoritra roa
tsorakazo feno kofehy
mpanasa lamba fisaka
borosy fandavahana tena
hex lohan'ny vatofantsika vatofantsika
Vatofantsika ampinga 4PCS
Vatofantsika ampinga 3PCS
vatofantsika antsantsa antiskid
valizy fanitarana ascenseur
vatofantsika fanitarana tokana
Nizara roa ny peratra iray ary niondrika ho endrika helika. Izany dia mahatonga ilay mpanasa lamba hampatanjaka lohataona eo anelanelan'ny lohan'ny fastener sy ny substrate, izay mitazona mafy ilay mpanasa lamba manohitra ny substrate sy ny kofehy kofehy mafy manohitra ny voanjo na kofehy substrate, izay miteraka fifandirana bebe kokoa sy fanoherana ny fihodinana. Ny fenitra azo ampiharina dia ny ASME B18.21.1, DIN 127 B, ary ny American Standard Military NASM 35338 (MS 35338 sy AN-935) taloha.
Ny mpanasa lohataona dia helix ankavia ary mamela ny kofehy hamafisina amin'ny làlan'ny tanana ankavanana fotsiny, izany hoe ny famantaranandro. Rehefa apetraka ny fihetsika havia havia dia manaikitra amin'ny sisin'ny bolt na ny nut ny sisiny atsangana ary ny ampahany ahodiny, ka mahatohitra ny fihodinana. Noho izany, ny mpanasa lohataona dia tsy mandaitra amin'ny kofehy havia sy ny faritra mihamafy. Ary koa, izy ireo dia tsy azo ampiasaina miaraka amin'ny mpanasa fisaka eo ambanin'ny mpanasa lohataona, satria io dia manasaraka ny mpanasa lohataona tsy hanaikitra amin'ny singa izay mahatohitra ny fihodinana.
Ny tombotsoan'ny mpanasa lamba amin'ny lohataona dia miorina amin'ny endrika trapezoidal an'ilay mpanasa lamba. Rehefa voafintina amina entana eo akaikin'ny tanjaky ny bolt dia hihodina izy io ary hanidina. Izany dia mampihena ny tahan'ny lohataona amin'ny vatan-tsolika izay mamela azy hitazona hery bebe kokoa eo ambanin'ny haavon'ny fihovotrovotra mitovy. Manakana ny famahana izany.
Ny mpanasa lohataona dia manakana ny voanjo sy ny baomba tsy hihodina, solafaka ary tsy ho afaka noho ny hovitrovitra sy ny tselika. Ireo mpanasa lohataona samy hafa dia manao an'io asa io amin'ny fomba somary samy hafa kely, fa ny fotokevitra fototra dia ny mitazona ny voanjo sy ny bolt amin'ny toerany. Ny mpanasa lamba sasany amin'ny lohataona dia mahatratra an'io asa io amin'ny alàlan'ny fanindronana ny fotony (bolt) sy ny voanjo miaraka amin'ny tendrony.
Ny mpanasa lohataona dia matetika ampiasaina amin'ny rindranasa izay misy fihoaram-pefy sy mety hikorisa amin'ny fatotra. Indostria izay matetika mampiasa mpanasa lohataona dia mifandraika amin'ny fitaterana (fiara mandeha, fiaramanidina, ranomasina). Ny mpanasa lohataona dia azo ampiasaina amin'ny fitaovana ao an-trano toy ny mpikarakara rivotra sy mpanasa lamba (milina fanasan-damba).
称 直径 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 （14）
d Min 2.1 2.6 3.1 4.1 5.1 6.2 8.2 10.2 12.3 14.3
Max 2.3 2.8 3.3 4.4 5.4 6.7 8.7 10.7 12.8 14.9
h 称 0.6 0.8 1 1.2 1.6 2 2.5 3 3.5 4
Min 0,52 0.7 0.9 1.1 1.5 1.9 2.35 2.85 3.3 3.8
Max 0.68 0.9 1.1 1.3 1.7 2.1 2.65 3.15 3.7 4.2
n Min 0,52 0.7 0.9 1.1 1.5 1.9 2.35 2.85 3.3 3.8
H Min 1.2 1.6 2 2.4 3.2 4 5 6 7 8
Max 1.5 2.1 2.6 3 4 5 6.5 8 9 10.5
Lanja≈kg 0,023 0.053 0,097 0.182 0.406 0.745 1.53 2.82 4.63 6.85
称 直径 16 （18） 20 （22） 24 （27） 30 36 42 48
d Min 16.3 18.3 20.5 22.5 24.5 27.5 30.5 36.6 42.6 49
Max 16.9 19.1 21.3 23.3 25.5 28.5 31.5 37.8 43.8 50.2
h 称 4 4.5 5 5 6 6 6.5 7 8 9
Min 3.8 4.3 4.8 4.8 5.8 5.8 6.2 6.7 7.7 8.7
Max 4.2 4.7 5.2 5.2 6.2 6.2 6.8 7.3 8.3 9.3
n Min 3.8 4.3 4.8 4.8 5.8 5.8 6.2 6.7 7.7 8.7
Max 10.5 11.5 13 13 15 15 17 18 21 23
Lanja≈kg 7.75 11 15.2 16.5 26.2 28.2 37.6 51.8 78.7 114
Teo aloha: Mpanasa lamba fisaka
Manaraka: Vatofantsika mitete
6mm mpanasa lohataona
Mpanasa lohataona roa coil
Sokiro fandavahana tena
Din6921 Flange Nuts, Hex Bolts mahery, Bolida heksim-by hex mainty, Hexagon Socket Head Bolts, Boloky Hex Bolts mainty, horonan,
Adress: faritra indostrialy atsimo andrefana, distrikan'i Yongnian, tananan'i Handan, faritanin'i Hebei
Tamin'ny 1 Novambra 2020, Yanzhao Fasten ...
Ny 2 Desambra 2020, ny Egyptianina c ...
Ireo mpivarotra manerana ny firenena dia mitsidika an'i Handan ...